7 Cunto Oo Yareeya Xanuunka Caadada Dumarka - Daryeel Magazine
7 Cunto Oo Yareeya Xanuunka Caadada Dumarka
Waxaa daraasaadka la sameeyay qaarkood sheegayaan in ku dhowaad 75% ee ah dumarka dhallinta yar iyo 25-50% ee dumarka qaan-gaarka ah ay la kulmaan xanuun iyo raaxo la’aan inta ay qabaan caadada.
Sidoo kale waxaa jira cuntooyin yareeya xanuunka caadada, waxayna kala yihiin:
Biyaha: waxaa haboon inaad cabtid ugu yaraan 2 ilaa 3 liitar oo biyo ah maalintii, waxay kaa ilaalinaya dibirada xiliga caadada.
Kalluunka nooca loo yaqaan salmon waxaa ku badan maadada la yiraahdo Omega-3 oo la dagaalanta caabuqa, sidoo kale kalluunka waxa uu hodan ku yahay Vitamin D
Akhriso: 9 faaido oo laga helo kalluunka nooca Salmon
Shukulaatada madow waxay kaa caawinaysaa inad dejiso murqaha. Iska xaqiiji in shukulaatada aad cunayso laga sameeyay ugu yaraan 70% geedka shukulaatada ee loo yaqaan COCOA.
Koostadu waxay kaa caawinaysaa inay yareyso xanuunka caadada sababtoo ah waxaa ku jirta maadada calcium-ka, caabitaan ahaan ayaad u shiidan kartaa, hadii aadan jeclayn dhadhankeeda waxaad ku darsan kartaa moos iyo caanaha yicibka (almond milk)
Mudoo dheer ayaa loo isticmaalayay in lagu daaweeyo hargabka, xasaasiyada iyo inuu caawiyo dheefshiidka. Sidoo kale qorfuhu waxa uu hoos u dhigaa xanuunka caadada sababtoo waxaa ku badan macdanta calcium, fiber iyo birta (iron). Shaah ayaad ku darsan iyo cuntooyinka kale.
Akhriso: 10 tallaabo oo aad iskaga yareyn kartid xanuunka caadada
Babaaygu Waxa uu hodan ku yahay Vitamins C iyo A. Waxaa aad ugu yar calories-ka waxaana ku badan nafaqooyin, waxaa uu wanaagsanyahay maqaarka jirka, sidoo kale waxa uu caawiyaa dheefshiidka.
Sanjabiisha: Sanjabiishu waxay la dagaalantaa hargabka, madax xanuunka iyo xanuunka caadada. Jeex sanjabiil ah ku darso koob biyo kulul ah kadibna cab.
Cuntooyinka ay haboontahay inaad ka fogaatid waqtiyada caadada waxaa ka mid ah, caanaha iyo burcadka (cheese), kafeega, sonkorta badan, hilibka cas iyo sharaabka soodhaha.